Ukwenza ngcono ukusebenza kweMagento nemiphumela yebhizinisi lakho | Martech Zone
NgoLwesine, Februwari 5, 2015 ULwesihlanu, February 6, 2015 Tony Barbagallo
IMagento iyaziwa njengeplatifomu ephezulu ye-e-commerce, inika amandla kokukodwa kokuthathu kuwo wonke amawebhusayithi okuthengisa online. Inethiwekhi yayo enkulu yomsebenzisi kanye nenethiwekhi yonjiniyela yakha i-ecosystem lapho, ngaphandle kobuchwepheshe obuningi bezobuchwepheshe, cishe noma ngubani angathola indawo ye-e-commerce futhi isebenze ngokushesha.
Kodwa-ke, kukhona okuphambene nalokho: IMagento ingaba nzima futhi yehle uma ingalungiselelwe kahle. Lokhu kungaba ukuvalwa kwangempela kwamakhasimende anamuhla asheshayo alindele izikhathi zokuphendula ezisheshayo kumawebhusayithi awavakashelayo. Eqinisweni, ngokusho kwe- inhlolovo yakamuva evela kuClustrix, Amaphesenti ama-50 wabantu abezothenga kwenye indawo uma iwebhusayithi ilayisha kancane amakhasi.
Ukukhula kwesidingo sejubane lewebhusayithi kushukumise ukuthuthukisa ukusebenza kweMagento phezulu ohlwini lwabathuthukisi abaningi abangochwepheshe. Ake sibheke izindlela ezintathu izinkampani ezingathuthukisa ngazo ukusebenza kwepulatifomu yazo yeMagento.
Qalisa ukusebenzisa inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe (CDN)
Amanethiwekhi Wokudiliva Okuqukethwe ikuvumela ukuthi ulayishe izithombe zesayithi lakho nokunye okuqukethwe okumile ezikhungweni zedatha eziseduze kwamakhasimende akho. Ukunciphisa ibanga lokuhamba kusho ukuthi okuqukethwe kuzofika lapho ngokushesha. Ngasikhathi sinye, ngokulayisha okuqukethwe kwakho kusuka kusizindalwazi sakho sewebhusayithi, ukhulula izinsizakusebenza ukuvumela abasebenzisi abafanayo ngisho nangaphezulu, ngezikhathi ezingcono zokuphendula amakhasi. Iseva yakho yedatha isebenza kahle kakhulu nangempumelelo enkulu lapho ingahlala igxile ekwakheni, ekuvuseleleni, ekuqinisekiseni nasekuqedeni ukuthengiselana. Ukusingathwa kokufundwa kuphela kudathabheyisi yakho kudala umthwalo ongenakugwenywa ongadingekile nomgogodla wezingosi ze-e-commerce eziphakeme kakhulu.
Lungiselela kahle i-server yakho yedatha
IMagento yenza imibuzo efanayo kuseva yedathabhethi njalo lapho kubukwa ikhasi, noma kungenazinguquko eziningi kule mibuzo ngokuhamba kwesikhathi. Idatha kufanele itholakale kusuka kudiski noma kwimidiya yokugcina, ihlungwe futhi isetshenziswe, bese ibuyiselwa kwiklayenti. Umphumela: ukucwilisa ekusebenzeni. I-MySQL inikeza ipharamitha yokumisa eyakhelwe ngaphakathi ebizwa ngokuthi query_cache_size etshela iseva ye-MySQL ukuthi igcine imiphumela yombuzo kwimemori, eshesha kakhulu kunokufinyelela kwi-disk.
Ukunciphisa izicelo, ukusebenzisa i-CDN nokulungisa isiphakeli sedatha ye-MySQL, kufanele kuthuthukise ukusebenza kweMagento; kodwa-ke kusekhona amabhizinisi amaningi angakwenza ukwandisa ukusebenza kwesayithi ngokuphelele. Ukwenza kanjalo abaphathi besayithi le-e-commerce badinga ukuphinda bahlole leyo database ye-backend ngokuphelele. Nasi isibonelo lapho ukukala i-MySQL kushaya udonga:
(Re) Hlola i-Database lakho
Izindawo eziningi ezintsha ze-e-commerce ekuqaleni zisebenzisa i-database ye-MySQL. Yisizinda semininingwane esivivinywe isikhathi samasayithi amancane. Yilapho kukhona inkinga. Imininingwane ye-MySQL inemikhawulo yayo. Imininingwane eminingi ye-MySQL ayikwazi ukuhambisana nezidingo ezikhulayo zamawebhusayithi akhula ngokushesha e-commerce, ngaphandle kokusebenza okuhle kweMagento. Ngenkathi amasayithi asebenzisa i-MySQL angasikala kalula kusuka kubasebenzisi abayi-zero kuya kwabangu-200,000, angaminyanisa lapho ekala kusuka kubasebenzisi abayi-200,000 kuya kwabangama-300,000 ngoba awanakukwazi ukukhuphuka ngokwengeziwe ngomthwalo. Futhi sonke siyazi, uma iwebhusayithi ingakwazi ukuxhasa ezentengiselwano ngenxa yedathabheyisi eyiphutha, umugqa webhizinisi uzohlupheka.
Cabanga ngesixazululo esisha - Ngenhlanhla, kunesixazululo: Imininingwane yolwazi ye-NewSQL igcina imiqondo yokuhlobana ye-SQL kepha engeza ukusebenza, ukukala nokutholakala kwezinto ezingekho kwi-MySQL. Imininingwane yolwazi ye-NewSQL ivumela amabhizinisi ukuthi afinyelele ekusebenzeni abakudingayo kuzinhlelo zawo zokusebenza ezibalulekile, njengeMagento, ngenkathi kusetshenziswa izixazululo ezinobungani konjiniyela asebevele bagxile ku-SQL.
Sebenzisa indlela yokukala - INewSQL iyi-database yezobudlelwano eqhosha ngokusebenza kokulinganisa okuvundlile, ukuqinisekiswa kokuthengiselana kwe-ACID kanye nekhono lokucubungula inani elikhulu lokuthengiselana ngokusebenza okuhle. Ukusebenza okunjalo kuqinisekisa ukuthi isipiliyoni sokuthenga kwamakhasimende asinankinga ngokunciphisa noma ngokuqeda noma ikuphi ukubambezeleka kwedijithali abebengakubekezelela ngenye indlela. Okwamanje, abenzi bezinqumo bangahlaziya idatha ukuze baqonde izindlela zokukhomba ngqo abathengi ngamathuba wokuthengisa nokuthengisa.
Amasayithi we-e-commerce angalungiselelwanga ngeke nje asebenze kahle uma engahlonyiselwe ukuphatha imithwalo esindayo, ikakhulukazi ngezikhathi zethrafikhi ekhuphukile. Ngokusebenzisa isizindalwazi se-SQL sokukala, esikwazi ukubekezelela amaphutha, ungaqinisekisa ukuthi isayithi lakho le-e-commerce lingaphatha noma yiliphi inani lethrafikhi cishe kunoma yisiphi isimo, futhi linikeze namakhasimende isipiliyoni sokuthenga esingenamthungo.
Ukusebenzisa i-database ye-SQL esikalini futhi kuthuthukisa ukusebenza kweMagento. Inzuzo enkulu yedatha yokulinganisa ye-SQL ukuthi ingakhula ngokulandelana ukufundwa, ukubhala, ukuvuselelwa kanye nokuhlaziywa njengoba kungezwa amaphuzu amaningi wedatha namadivayisi. Lapho ukwakhiwa kokulinganisa kufinyelela efwini, izinhlelo zokusebenza ezintsha zingamunca kalula ukungezwa kwamakhasimende amasha nokwenyuka kwevolumu yokuthengiselana.
Futhi kuhle, leyo database ye-NewSQL ingasabalalisa ngokusobala imibuzo kumaseva amaningi wedatha, ngenkathi ilayisha ngokuzenzakalela ibhalansi yomsebenzi wakho wesayithi. Nasi isibonelo semininingwane egciniwe ye-NewSQL, iClustrixDB. Isebenzisa ama-server node ayisithupha, ihambisa zombili imibuzo ebhalwayo neyokufundwa kuwo wonke ama-node ayisithupha, ngenkathi igcina ukubhekisisa ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza kanye nezikhathi zokwenza imibuzo:
Qinisekisa umuzwa omuhle wamakhasimende
Uma ungumnikazi webhizinisi, kufanele wenze konke okusemandleni akho ukuqinisekisa isipiliyoni esihle se-e-commerce kumakhasimende akho, noma ngabe isayithi lakho liphethe ithrafikhi engakanani nganoma yisiphi isikhathi. Ngemuva kwakho konke, uma kukhulunywa ngezinketho zokuthenga online, namuhla amakhasimende anokukhetha okungapheli - isipiliyoni esisodwa esibi singabaxosha.
Tags: iqoqoMagentoukusebenza kwe-magentomysqlizindabaukusebenza
UTony uyi-CMO ka UClustrix, isizindalwazi esihola phambili se-SQL esiklanyelwe ifu kanye ne-database yokuqala eyakhelwe ngqo ukuhlangabezana nokukala kwemali engenayo, ukusebenza kanye nokutholakala kwezidingo zamasayithi wanamuhla e-commerce.